एनआरएनलाई खाडीका कामदार पुग्यो जस्तो छ - ब्लग - कान्तिपुर समाचार
एनआरएनलाई खाडीका कामदार पुग्यो जस्तो छ
- मेघराज सापकोटा, युएई
खाडीमा बसेर यति सदस्य बनायौं भनेर केन्द्रीय पदको बार्गेनिङ गर्ने, फलानो पदमा जिताइदिन्छु भनेर पैसाको लागि बार्गेनिङ गर्ने खाडीका एनआरएनएहरु युरोप र अमेरिकामा बस्ने एनआरएनएलाई अब चाहिएको छैन ।
वैशाख ४, २०७४-गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएन) युएईको १४ अप्रिलमा बसेको बैठकले आगामी कार्यकाल २०१७–०१९ को नयाँ कार्यसमिति चयन गर्न ८ सेप्टेम्बरलाई रोजेको छ । बैठकले नयाँ सदस्यता शुल्क ३५ बाट बढाएर सय दिर्हाम (झन्डै ३ हजार रुपैयाँ) तोकेको छ । एनआरएनको अन्तराष्ट्रिय समन्वय समिति (आइसिसी)को परिपत्र अनुसार सदस्यता शुल्क बढाइएको बताइएको छ ।
प्रत्येक देशमा रहेका एनसिसीले एक जना सदस्य बापत ३ डलर सदस्यता शुल्क आईसीसीलाई बुझाउने गर्दै आएको थियो । आईसीसीको नयाँ परिपत्र अनुसार अब १५ डलर बुझाउनु पर्नेछ । त्यसकारण युएईमा सय दिर्हाम पुग्यो । सय दिर्हामले एउटा गरीब जनताले के के गर्जो टार्न सक्ला ? छोरा छोरीको २ महिनाको बोर्डिङ स्कुलको शुल्क तिर्न सक्दो होला, एक महिनाको खाजाको जोहो गर्न सक्दो होला, कापीकलम र किताब पनि किन्न सक्दो होला । यो पनि शहरमा बस्ने निम्न बर्ग र निम्न मध्यम बर्गियहरुको क्षमताको कुरा भो । दुर्गममा त अझ धेरै नै गर्न सकिन्छ ।
यसको मतलब आईसीसीलाई खाडीका कामदार एनआरएनएहरु चाहिएको छैन । खाडीमा बसेर यति सदस्य बनायौं भनेर केन्द्रीय पदको बार्गेनिङ गर्ने, फलानो पदमा जिताइदिन्छु भनेर पैसाको लागि बार्गेनिङ गर्ने खाडीका एनआरएनएहरु युरोप र अमेरिकामा बस्ने एनआरएनएलाई अब चाहिएको छैन । हिजो सार्मथ्य कम हुँदा, आवाज सानो हुँदा सामथ्र्य र आवाजलाई ठुलो बनाउन खाडीका कामदारलाई बिदेश बसाईको अवधी ६ महिनाको सिमा तोकेर एनआरएनए बनाउने आवश्यकता अब सकिएको छ । अमेरिकी, अस्ट्रियाली, युरोपेली एनआरएनको ईच्छा पुरा भएको छ । संबिधानमा दोहोरो नागरिकताको माग पुरा भएको छ । खाडीका मजदुरलाई ढाल बनाएर संख्या देखाएर सरकारसँग गर्नु पर्ने मुख्य बार्गेनिङ पुरा गरेको छ । किनकी अब सय दिर्हाम तिरेर युएईमा एनआरएनए बन्नेहरु स्पोन्सरवाला मात्रै हुनेछन । खाडीमा बसेर ५० डिग्रीको तातोमा पसिना बगाउनेको आवश्यकता अब आईसीसी एनआरएनलाई छैन । त्यसो त कतारमा यो अभ्यास सुरु भएको धेरै भईसक्यो । अब युएईमा पनि सुरु भयो ।
तर्क गर्लान १०० दिर्हाम उठाएर नेपालमा एनआरएनए भवन बनाउने योजना छ । अलिशानको भवन । कालो सिसा भएको, विवाह हल, सभा हल, बैठक हल, पाहुना कोठा सबै भएको ५ तारे भवन देखेर तातो हावामा काम गर्ने खाडीका एनआरएनले छाती फुलाउने छन । त्यही बेला भवनमा बैठक चलिरहेको हुदो हो । त्यही बेला भवनमा हुने खाने टाईसुटवालाको विवाह र भोज भतेर चल्दो हो । बाहिर सडकमा उभिएर अहिलेका कामदार एनआरएनएले मनमनै भन्लान मैले पसिनामा साटेको अलिशान भवन यही हो । अबको एनआरएनए यस्तै बन्ने छ ।
बर्तमान कार्यकालमा ३५ दिर्हाम शुल्क तिरेर युएईमा सदस्य बन्नेको साख्या २ हजार ५ सय ४१ छ । संख्याको हिसाबले बर्तमान कार्यकालमा सदस्यता फारम बापत ८८ हजार ९३५ दिर्हाम उठेको देखिन्छ । जस मध्ये एक जना सदस्य बराबर ३ डलरको हिसाबले २८ हजार दिर्हाम केन्द्रलाई बुझाएको देखिन्छ । बाँकी ६० हजार र उम्मेद्वार शुल्क गरी झण्डै ७०/८० हजार दिर्हाम भन्दा बढी रकम बर्तमान समितिसँग रहेको थियो । त्यो बचेको ८० हजार दिर्हामले युएईमा के के काम भयो ? भएको कामको उपलब्धी के के भयो ? खर्च भएर मात्र पनि भएन उपलब्धी के के भो त्यसको लेखा जोखा हुन आवश्यक छ । आशा गरौ, त्यसको विवरण सही स्थान र समयमा बर्तमान कार्यसमितिले चित्त बुझ्ने गरी दिने नै छ ।
एनआरएनएमा राजनीति हुन्छ । कोही कांग्रेस, कोही एमाले र कोही माओवादी हुन्छन । कसैले माने पनि हुन्छ, नमाने पनि हुन्छ । युएईमा मात्र हैन आइसिसिमा पनि हुन्छ । नहुने भए आईसीसी अध्यक्ष शेष घले पनि अध्यक्ष हुने बेलामा कहिले केपी ओली, कहिले शेर बहादुर र कहिले प्रचण्डको घरमा धाउनु पर्नेे थिएन । उनी धाए र अध्यक्ष पनि भए भलै उनी सम्पूर्ण रुपले अध्यक्ष पदको लागि योग्य थिए । सायद नधाएको भए अध्यक्ष नहुन पनि सक्थे । किनकी नेपालको राजनीतिमा योग्यता सँगसँगै राजनैतिक आशिर्बाद भएन भने कुनै पनि संगठनमा बसेर काम गर्न गार्‍है हुन्छ । अब भोली देखि एनआरएनएमा राजनीति नगरौ, भनेर हुने कुरा हैन । तपाईंले नगरे अर्कोले गर्छ । रिति र तिथि नै यस्तै बसेको छ ।
यहाँ कामको कुरा हैन सानको कुरा रहेछ । यहाँ शानको कुरा मात्रै पनि हैन नाम र दामको पनि कुरा रहेछ । भित्रका गुह्य राजनीति डरलाग्दो हुँदो रहेछ । बाहिर बसेर हेर्दा देखिने एनआरएनए र भित्रबाट देखिने एनआरएनए आकाश पतालको फरक रहेछ । जाँडहरुमा डुबेर मदिरा सेवन गर्नु हुन्न भन्दै हिंड्ने एनआरएनए मात्र हैन सामाजिक संजालमै बियर र हुस्कीका बोतल ठड्याउने एनआरएनए पनि हुँदा रहेछन ।
मध्यपुर्ब भेलाको बेला कतार काण्डमा त रक्सीनै रोयो रे । युएईको एनआरएनएहरु देखेर हैन नि फेरी, विश्व भरिका एनआरएनएहरु देखेर कतारमा पाइने बीयर र हुस्कीले बुर्कुसी मारे रे खुशीले । उनिहरु एनआरएनएको अर्को क्षेत्रिय सम्मेलन पनि कतार मै होस् भनेर रुद्राक्षको माला जपेर बसेका छन रे । मास्टरले ४५ मिनेटको कक्षा कोठामा चुरोट खैनी खान हुन्न है भन्दै ४६ औं मिनेटमा बाहिर निस्केर चुरोटको ठुटो सल्काए जस्तो एनआरएनएहरु पनि हुँदा रहेछन बरै ! भनेर लोक गज्जबले हाँसेको छ ।
तेरो नाम र मेरो नाममा घम्सा घम्सी गर्ने एनआरएनएहरु पनि देखिए । पत्रकारलाई फलानोको नाम नलेख मेरो लेख भन्ने एनआरएनएहरु पनि भेटिए । त्यति मात्र कहाँ हो र एनआरएनएका अध्यक्ष जुन जुन पार्टीमा आस्था राख्छन वा हुनेवाला सम्भाबित अध्यक्ष जुन जुन पार्टीमा आस्थाबान होलान त्यही त्यही पार्टी फेर्दै हिंड्ने एनआरएनहरु पनि देखिए । कोट लगायो, गाडीमा बस्यो अनी फेसबूकमा “ गोइङ टु दुबई फर एनआरएनए मिटिङ’ लेख्न कम मज्जा आँउदैन । अझ ६ महिनामा एक पटक बैठकमा मुहार देखायो हस्ताक्षर दन्कायो । अनी आफ्नो पद सुरक्षीत राख्ने प्रचलन पनि नयाँ कहाँ हो र ? चलेकै छ ।
एनआरएनएको कार्यसमितिमा युवा र महिला संयोजक भन्ने पद छ । ती पदमा आसिन मान्छेका काम के हो खै यो मनुवाले बुझ्न सकेको छैन । २ बर्षमा कति युवालाई परिचालन गरियो, कति युवालाई के के कुरामा सहभागी गराईयो, के के काममा उनीहरुको क्षमतालाई प्रयोग गरियो कामको फेहरिस्त अब अधिबेशनको बेला देखिएला । फगत नाक बचाउने सुची । आरोप सहितको सुची । समस्या सहितको सुची । मैले त गर्न खोजेको फलानाले दिएन भन्ने आशयको फेहरिस्त । फेरी यो संयोजक पद युएईमा मात्रै पनि हैन विश्वमै र आईसीसीमै पनि छ । काम चाही सुक्को नाई !
कर्म र धर्मलाई तिलान्जली दिएर कोटमा अत्तर छर्केर ती एनआरएनएहरु फेरी तपाईं हाम्रो घर दैलोमा परिचय पत्र बटुल्न आउने दिन आएको छ । परिचय पत्र दिएर सबैले सहयोग गर्न नभुल्नु होला । पैसा दिनु पर्दैन अब, यो त स्पोन्सर एनआरएनए बन्ने अभियान हुनेछ । २ बर्ष युएई बसेको प्रमाण दिने एनआरएनए सदस्यता लिने । पैसा कि त जर्मनी, कि अमेरिका, अस्ट्रेलिया कि त जापानबाट आउनेछ । ढुक्क हुनुस् ।
› मेघराज सापकोटा
कोलोराडोमा ‘नेपाल डे परेड’ ›